ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် စိုးရိမ်မှုကြောင့် ပုံမှန်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ ဝင်ရောက်ခွင့် ဆိုင်းငံ့ - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် စိုးရိမ်မှုကြောင့် ပုံမှန်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ ဝင်ရောက်ခွင့် ဆိုင်းငံ့
တိုကျို၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
ဂျပန်နိုင်ငံက ကူးစက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်သော ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပျံ့နှံမှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှ ရောက်ရှိလာသည့် ပုံမှန်နေထိုင်သူမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသား ဝင်ရောက်ခြင်းများကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် က ဆိုင်းငံ့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များသည် ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်သစ် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဒေသများမှ ဂျပန်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာသည့် ဂျပန်နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူများသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးမှု တင်ပြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသ အချို့မှ စီးပွားရေးသမားများ နှင့် ကျောင်းသားများမှာမူ ယခုနောက်ဆုံးကန့်သတ်ချက်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်များပယ်ဖျက်ရန်အတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်ဆောင် ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဂျပန်အစိုးရသည် ပြည်သူများကို ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်မှ ကာကွယ်ရန် လျင်လျင်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yoshihide Suga က သတင်းထောက်များကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်က ပြောခဲ့သည်။ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်အသစ်များသည် “ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ပျံ့နှံ့မှုကို ကြိုတင်တားဆီးရန် အဆင့်မြှင့်တင် အရေးယူလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားများ၏ အသက်တွေနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို” ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း Suga က ဆိုသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကို နိုင်ငံအတော်များများက အတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်သည် ပိုမိုကူးစက်လွယ်ကြောင်း၊ သို့သော် ကူးစက်မှုကာကွယ်ရန် အခြေခံလုပ်ဆောင်ရမည့် လိုအပ်ချက်များမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း Suga က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်များတွင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိကြရန် ၎င်းက ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရေး အစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်အပေါ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း အလုပ်လုပ်ချိန် လျှော့ချနိုင်ရန် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး စိစစ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မကြာသေးမီက ဗြိတိန်နှင့် တောင်အာဖရိက နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ပုံမှန်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်းဝင်ရောက်မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ယနေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် ကူးစက်ခံထားရသူ လူရှစ်ဦးကို အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် ထိခိုက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွက် ဆိုးဆိုးရွားရွား လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ဝင်ငွေ ပြန်လည်ရရှိစေရန် နိုင်ငံတကာခရီးသည်များအတွက် နယ်စပ်များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စတင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။သော် နိုဝင်ဘာလကတည်းက COVID-19 တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားလာသည့်ကြားမှ ကျန်းမာရေးစနစ်တွင် အပြင်းအထန်အားအင်ကုန်ခန်း လာသောကြောင့် ယခုအခါတွင် ခြေတစ်လှမ်းပြန်ဆုတ်ရန်နှင့် နယ်စပ်များကို တင်းကြပ်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Japan suspends entry of non-resident foreigners amid concerns over new virus strain
TOKYO, Dec. 28 (Xinhua) — Japan on Monday suspended entries of non-resident foreign nationals arriving from the majority of the world inabid to prevent the spread of the new, highly transmissible coronavirus strain.
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga told reporters Monday that his government is responding quickly to deal with the new strains of the virus to protect the people of Japan.
Suga said the new entry restrictions were aimed at protecting “our citizens’ lives and livelihoods, by taking measures in advance to forestall the spread of the new virus strain.”
First detected in Britain, the new coronavirus variant has since been confirmed inanumber of countries.
Suga added that the new strains are said to be more infectious, but the basic measures required to prevent infection remain the same.
He reiterated his call for people to haveaquiet New Year holiday and said the government aims to revise the law to ensure that businesses shorten operating hours to prevent the spread of the virus upon government request.
So far in Japan, eight people have been confirmed to be infected with the variant detected in Britain.
Japan had slowly begun to open up its borders to international travelers inabid to help bring badly needed revenue back to the recession-hit economy.
But it has now been forced to takeastep backwards and tighten its borders owing to the already heavy strain on the medical system amidaresurgence of COVID-19 cases since November. Enditem
People wearing face masks stop atared light in Tokyo, Japan, Dec. 12, 2020. Japan loggedarecord of 3,037 daily COVID-19 cases on Saturday, surpassing 3,000 for the first time as Tokyo and several other prefectures marked records inasingle day amidaresurgence of infections. (Photo by Lyu Tianze/Xinhua)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အကြိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ အပါအဝင် အချို့ဒေသများတွင် ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှု ကန့်သတ်ချက် သက်တမ်းတိုးမည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာ